Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Italy War Deg Deg Ah » Bandhigga ECCO oo ah sawir dalxiis u gaar ah Rome
Jebinta Wararka Caalamka • dhaqanka • Warshadaha Warshadaha • Italy War Deg Deg Ah • News • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Wararka kala duwan
ECCO waa carwo iyo sawirro dalxiis oo u gaar ah Talyaaniga oo lagu soo bandhigayo kuwa haysta deeqda waxbarasho ee Akadeemiyadda Faransiiska ee Rome oo ku taal Villa Medici ee ku dhex taal Villa Borghese ee Pincio.
Bandhigu wuxuu u qaataa qaab shucuur xamaasad leh oo soo noqota isla markaana kordhisa shaqada hal sano ah ee Villa Medici.
Bandhigan waxaa laga soo qaaday Juun 18 ilaa 8 Ogosto 2021, 16, waxaa qoray Laura Cherubini, bandhigan wuxuu isu keenayaa guulaha XNUMX farshaxan, hal abuurayaal, iyo cilmi baarayaal.
Deganaanshaha sanadka ee abuurka, tijaabada, iyo cilmi baarista ayaa lagu soo gabagabeynayaa munaasabadii lagu qabtay Villa Medici.
Si xoog badan maadooyin kala duwan, ECCO waxay muujineysaa qeexitaanka udhaxeysa shaqsiyaadka hal abuurka ah iyo mashaariicda wadajirka ah, waxayna xireysaa xiriiro lama filaan ah oo udhaxeeya anshaxyada la matalayo, laga bilaabo rinjiyeynta ilaa farshaxanimada iyo gudbinta sawir qaadista, qaab dhismeedka, abuurista codka, taariikhda iyo aragtida farshaxanka, halabuurka muusikada, farshaxanka caagga ah, iyo suugaanta.
Waxyaabaha gaarka ah ee daabacadan 2021 waxay kujirtaa kulanka miro dhal ah ee udhaxeeya 16 shaqsiyaad iyo luuqado badan oo farshaxanimo ah, taasoo ka dhalatay mashruuc tifaftireed wadajir ah oo soosaaray inta lagu gudajiray sanadka oo dhan oo degenaa oo maanta furaha u ah helitaanka bandhigga.
Mashruucan xulashada ah, ee ay uur-galeen asxaabtii deyrta 2020, wuxuu qaatay qaab joornaal bille ah oo internetka ah (ecco-revue.com) oo soo dhaweynaya tabarucaadka noocyada kala duwan: fiidiyowyada, qoraallada, codadka, sawirrada, iyo sawirrada. Waxaa loogu sawiray qaab bilaash ah oo tijaabo ah, waxay ku kobcinayaan joornaalka 7 arrimood, oo mid walba oo ka mid ah uu mawduucoodu u qaato eray dhawaaqaya dhawaaq iyo / ama qaab marmarsiinyo looga dhiganayo
Bandhigga sanadka dhammaadkiisu waa qayb ka mid ah macnaha guud ee wadashaqeynta oo ay asxaabtu abuureen "bulsho ku meelgaar ah" ereyada ilaaliyaha, Laura Cherubini. Qaab dhismeedka qaab dhismeedka mid kasta oo ka mid ah mashaariicda - kuwaas oo qaar ka mid ah ay uur leeyihiin si ay ula jaan qaadaan joornaalka iyo kuwa kale oo madaxbannaan - waxay daaha ka qaadi doonaan dhinacyada kale ee abuuritaanka casriga ah.
Bandhigga ECCO waxaa la socon doona buugga farshaxanka kaas oo isu keenaya xulasho shaqooyin ay wada shaqeeyaan asxaabta Akadeemiyada Faransiiska ee Rome. Buugga ayaa la iibin doonaa ee Villa Medici.
Waxaa aasaasay sanadkii 1666 kii Colbert, Académie de France à Rome waxaa loo sameeyay in lagu soo dhoweeyo guuleystayaasha Prix de Rome iyo farshaxanleyda ay ilaaliyaan kuwa waaweyn ee Faransiiska ah ee dhameystiri kara tababarkooda xiriirka Rome iyo Talyaaniga.